हाँस्य कलाकारलाई कसले ततायो समाजसेवामा ? « Mazzako Online
हाँस्य कलाकारलाई कसले ततायो समाजसेवामा ?
हाँस्य कलाकारहरु अहिले समाजसेवामा होमिएका छन् भन्दा हुन्छ । सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे सरसफाई अभियानमा लागेर चर्चा पाइरहेका छन् । उनीहरुले जाडोले का“पेका भूकम्प पीडितलाई सिरक, डसना, ब्ल्याङ्केट वितरण गरेर चर्चा पनि पाएका छन् ।
सिताराम र कुञ्जनाले चर्चा पाइरहँदा केही दिन अगाडि दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला पनि न्यानो वितरणमा देखिए । यी दुइले पनि जाडोका कपडास“गै २ लाख सहयोग गरे । अब, चर्चित हाँस्य कलाकार जितु नेपाल पनि समाजसेवामा देखिएका छन् ।
भूकम्प गएलगतै गाउँ गाउँमा पुगेर हाँस्य कलाकारहरुले दर्शकलाई हसा“एर सेवा गरेका थिए । अब भने उनीहरु न्यानो कपडा वितरणमा नै अगाडि सरेका छन् । सिन्धुपाल्चोक फुल्पिङ डा“डाका ५ र ७ नम्बरका गाविसमा पुगेर कलाकार जितु नेपालले न्यानो सिरक वितरण गरेका हुन् । जाडोले समस्यामा परेका आफ्नो गाउ“का ८७ परिवारलाई उनले राहत वितरण गरेका हुन् । न्यानो सिरक पाउनेमा ५२ दलित परिवार छन् भने ३५ घरपरिवार जितुका आफ्नै गाउ“का छन् ।
सिताराम, कुञ्जना, दीपक, दीपा, जितु लगायतका हाँस्य कलाकारहरुलाई अहिले समाजसेवाले छोएको छ । हा“स्य कलाकारहरु यो कुरामा अगाडि बढ्दा नेपाली फिल्मका कलाकार भने महोत्सव, विदेशी कार्यक्रम र फिल्म निर्माणमा नै व्यस्त छन् ।